🥇 ▷ Imaatinka Apple Pay wuxuu ku riixayaa dadka isticmaala inay adeegsadaan adeegyo kale sida Google Wallet ✅
Imaatinka Apple Pay wuxuu ku riixayaa dadka isticmaala inay adeegsadaan adeegyo kale sida Google Wallet
Apple PayIn wax ka yar hal bil, waxay bilaabeysaa inay ku guuleysato Mareykanka
In kasta oo Apple Pay xitaa ma jiro bil xitaa oo lagu noolaado Wadanka Mareeykanka, xasuusnow in helitaankiisu uu la yimid macruufka 8.1, heerka isticmaalka iyo qanacsanaantu waxay umuuqataa inay balan qaadeyso mustaqbal wanaagsan habka cusub ee lacag bixinta iyadoo loo marayo Apple mobile. Sida muuqata, xogtii ugu dambeysay ee laga helo arrintan, sidoo kale Dunida lacagaha dijitaalka ah guud ahaan waxay bilaabaysaa inay ka faa iideystaan ​​hawshan cusub ee ay soo saareen wiilasha Cupertino.
Silsilada sida Mc Donald’s ama Walgreens waxay diiwaan geliyaan tiro badan oo bixinno ah iyadoo loo marayo Apple Pay
Markii la sameynayo falanqaynta xogta, tusaale ahaan, iibsiyada lagu sameeyay silsiladaha cunnada ee caanka ah ee Mc Donald’s, waxaa loo arki karaa 50% lacagaha la bixiyay iyadoo loo marayo nidaamka bixinta Touchez-ka (adigu Touchez oo lacag bixin ah) lagu sameeyay Apple Pay. Dhanka kale, silsiladaha farmasiiyada ee Mareykanka, Walgreens, ayaa uga mahadcelinaya nidaamkan lacag bixinta ay ku guuleysteen in ay labanlaabaan lacagaha ay ku bixiyaan mobilada.
Tirooyinkani runtii waa kuwo cajiib ah, marka lagu daro inay ku sii kordhiyaan waaxaha kala duwan ee suuqa. Tusaale kale oo xusid mudan waa silsiladda suuqyada waaweyn ee ay maamusho All Foods, oo intii lagu jiray muddadii u dhexeysa Oktoobar 20 iyo Nofembar 6 la soo sheegay in ka badan 150,000 oo macaamil ganacsi.
Dabcan, waxay u badan tahay inay jiraan bakhaarro halkaas oo tikniyoolajiyaddan cusubi aysan gaarin heer caan ah, sida tirooyinkaan la soo saaray. Mid ka mid ah kuwan waa kiiska silsiladda toy-caan ee Toys R Us toy, oo 8770 dukaanno ku leh Mareykanka, oo aan arkin koror xoog leh xagga bixinta mobilada. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira kalsooni taas oo keliya Waa waqti, macaamiisha inay bartaan sida loo adeegsado tikniyoolajiyadan cusub, Xusuusnow in bil aysan ka yarayn tan iyo markii la shaqeynayay.
Aaminaada Apple iyo sida ugu fudud ee habka lacag bixinta ay u yihiin, waa furayaasha guusha Apple Pay
Dhanka kale Denée Carrington, oo ah falanqeeyaha Baaritaanka Forrester, ayaa soo jeedisay in Guusha nidaamka lacag-bixinta taleefanka ee Apple, sidoo kale loo yaqaan Apple Pay, waa dabcan kalsoonida ay isticmaaleyaashu ku qabaan shirkadda Kalifoorniya., laakiin gaar ahaan sida ay u fududahay habka lacag-bixinta, kaas oo door bidaa baahintiisa deg degga ah.
Muuqaalka labaad ee dhacdada weyn ee heleysa Apple Pay waa in ay kordhisay xiisaha bulshada guud ahaan aaladaha lacag bixinta kala duwan ee guud ahaan, sida la mid ah Google Wallet ama Softcard.